Ny Antsipirihany Faran’izay Kely Indrindra Momba Ilay Lalànan’ny Fitorohana Ao Trinidad & Tobago: Mety Hahabe Asa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2016 17:02 GMT
“Mpitoroka” — Sary an'i Neil Moralee, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0.
Ny zavamisy hoe tsy ela akory izao i Afra Raymond no nametra-pialàna tamin'ny toerany — tao anatinà resabe — tsy ho Filohan'ny Filankevitra Iaraha-mitantana – Joint Consultative Council (JCC), ilay rantsana miasa ho toy ny alika mpiambina ny indostrian'ny fanorenana mikirakira vola an-davitrisa ao Trinidad, dia tsy nanakana azy izany tsy hivantambatana fiteny toy ny hatrizay momba ireo olan'ny mangarahara sy ny fahaizana mitantana ny fanomezana tsena sy ny asam-panjakana.
Tao anatin'ny lahatsoratra am-bilaogy farany nosoratany, noresahany ilay Tolodalàna 2015 momba ny Fiarovana ireo Mpitoroka — tolodalàna natolotra ary araka ny teôria dia mety hanome fiarovana ireo olompirenena izay mitoroka tsy fetezan-javatra, na izany any anaty sampandraharaham-panjakana, na any amin'ny tsy miankina. Nohazavain'ny lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny firenena :
Tanjon'ity tolodalàna ity ny hiady amin'ny kolikoly sy ireo fanao tsy manjary hafa, amin'ny fandrisihana sy fanamoràna ny fiampangàna ireo fitondrantena tsy mendrika any amin'ny seha-panjakàna sy tsy miankina, ny hiaro ireo olona manao ireny fiampangàna ireny amin'ny valifaty, ny hanao fanadihadiana ireo olona nanaovana fiampangàna ary hitrandraka izany sy hitondra izay olana hafa mifandray aminy…
Tamin'ny fanoratana momba azy io, naniry hanaitra ny sain'ny daholobe mikasika ilay tolodalàna i Raymond, hatramin'ny nandaharana hoe amin'ny 22 Janoary 2016, hanao tatitra momba izay fahitàna azy eo anatrehan'ny Parlemanta ilay Kaomisiona Iraisana Manokana. Ho an'i Raymond, izao araka izany “no fotoana hijerena ireny sy hitondràna fanehoankevitra ofisialy.”
Tena nisy ezaka marina tokoa — amin'ny ankapobeny izay notarihan'ny JCC teo ambany fitantanan'i Raymond — ho an'ny vondrom-piarahamonina sivily mba hanaovany dingana mandroso sy hanao izay haharenesana ny feony ho fanarahana akaiky ireo politisiana sy ireo hafa mpiandraikitra ny volam-bahoaka. Tamin'ny 2014, ny JCC sy ireo vondrona fiarahamonina sivily hafa dia nanampy tamin'ny famoahana tombana tsy miankina izay nitondra tamin'ny fitokonana voalohany tsy hisakafo nataon'i Dr. Wayne Kublalsingh, mpikatroka mpiaro tontolo iainana, momba ilay asa fanorenana ampahanà arabe migodana nahabe resaka hatramin'ny farany.
Nisy kely ihany fepetra vitsivitsy tao anatin'ilay tolodalàna izay mendrika homarihana hoy Raymond. Notsipihany ny teny hoe “fanilikilihana tsy an-drariny”, ohatra, izay nitondra azy hanontany tena “raha toa ny fampidirana io teny io ka hanokatra toerana ho an'ny fisalasalàna ary hanoso-kevitra aza hoe raha ny marina dia “rariny” ny hetsika sasany amin'ny fanilikilihana. Nanontany tena izy momba ny famaritana ny “fitondrantena tsy mendrika”, indrindra fa fantatra hoe “ny tsy fahombiazana nandritry ny taona marobe teo amin'ny sasany amin'ireo Orinasam-panjakàna lehibe indrindra tsy nahavita nanome tatitra ara-bola narahana fitsirihana dia mametraka azy ireny tsotra izao ho ao anatin'io sokajy io”.
Nasongadiny ihany koa ny andàlana iray izay milaza fa :
Tsy misy na inona na inona ao anatin'ity tolodalàna ity manome alàlana ny olona hitoroka zavatra voaaron'ny lalànan'ny tsiambaratelon'ny asa, ary ny fiampangàna zavatra tahaka izany dia tsy fiampangàna voaaro.
Amin'ny firesahany raharaha iray teny amin'ny fitsaràna mahakasika olana iray tahaka io, izay nandresan'ny JCC tamin'ny 2014 (taty aoriana natsimbadiky ny fanjakàna ny didy rehefa nanaovany fampakàrana), nohazavain'i Raymond :
Tsy mahafapo io raha ny fijeriko satria ao anatin'ny antontan-taratasy tahaka ireny mihitsy no mety ahitàna ny porofo amin'ireo nanao ny tsy mety ka nampahafantarana ny tsy maha-ara-dalàna ny asa tsy mendrika sy tsy araka ny lalàna vitany […] Ho ahy [ity ampahany amin'ilay tolodalàna ity] dia toa dingana manan-danja mitondra amin'ny fihemorana amin'io olana lehibe io.
Teboka iray hafa mampifanolana ho an'i Raymond ny valisoa ho an'ireo mpitoroka :
Misy ireo mpitoroka nandray anjara tamin'ilay heloka bevava ary misy ireo nitazam-potsiny. Ahoana no fomba hiatrehan'ilay tolodalàna ireny karazana mpitoroka samihafa ireny?
Angamba ny olana tena manan-danja indrindra, na izany aza — ho an'i Raymond sy ireo olompirenena hafa izay mety liana amin'ilay tolodalàna sy ny vokatra mety haterany amin'ny fanaovana politika momba ny kolikoly — dia ny fanenjehana. Manana laza ratsy amin'ny tsy fanenjehana ireo fotsy vozon'akanjo nefa mpanao heloka bevava i Trinidad sy Tobago :
Miverina amin'ny fanontaniana efa tranainy be fotsiny isika hoe rahoviana isika no tena hanao fanadihadiana matotra, hanenjika [sy hanasazy] ireo fotsy vozon'akanjo nefa mpanao heloka bevava izay miasa tsy maty manota eto amin'ny firenentsika? Raha tsy misy dingana mahomby hitondràna ireny mpanao heloka ireny ho any am-ponja na hamerenana ny vola nangalariny, dia ho “tandrimo mihodina ambony fotaka” fotsiny ihany isika.
Vakio manontolo ato ilay tolodalàna tsy nisy nanombinana.